~ Witch83၏ စိတ်ကူးကမ္ဘာ ~: April 2009
နေ့ လည်ဆို မင်းသားလိုစား
ညဆို သူတောင်းစားလိုစားတဲ့ ......
အဲဒီဆိုရိုးစကားလေးကို အားလုံးပဲ ကြားဖူးကြမှာပါ။ ဆေးပညာအရလည်း အရမ်းကို မှန်ကန်တဲ့ ဆိုရိုးစကားလေးပါ။ မြန်မာလူမျိုးတွေဟာ မနက်စာကို ဘယ်တော့မှ ပြည့်ပြည့်ဝဝ မစားတတ်ကြပါဘူး။ အဲဒါဟာ အင်မတန်မှ မှားယွင်းတဲ့ အလေ့အကျင့်တစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မနက်ခင်းမှာ ပြည့်ပြည့်ဝဝစားထားမှ တစ်နေ့ လုံးအတွက် အားအင်တွေပြည့်ဝနေမှာပါ။ အဲဒါကြောင့် မြန်မာ့ရိုးရာ မနက်စာလေးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
မုန့် ဟင်းခါးကတော့ မြန်မာလူမျိုး တော်တော်များများ ကြိုက်ကြတဲ့ အစားအစာပါပဲ။ ငါးပြုတ်ရည်၊ ပဲမှုန့် ၊ ဆန်မှုန့် ၊ ချင်း၊ စပါးလင်၊ ကြက်သွန်ဥ၊ ငှက်ပျောအူဖတ်တွေနဲ့ချက်ထားတဲ့ မုန့် ဟင်းခါးဟင်းရည်မွှေးမွှေးနဲ့ အတူ မုန့် ဖတ်၊ မိမိနှစ်သက်ရာအကြော်(အကြော်အမျိုးမျိူး၊ ဘဲဥ၊ အီကြာကွေး)၊ ကြက်သွန်ဖြူ / နီဆီချက်တို့ နဲ့တွဲဖက်ပြီး အရသာရှိစွာ စားသုံးနိုင်ပါတယ်။
မုန့် ဟင်းခါးမစားချင်ဘူးဆိုရင်တော့ ပဲပြုတ်နံပြား စားပေါ့။ ဂျုံနဲ့ လုပ်ပြီး ဖုတ်ထားတဲ့ ပူပူနွေးနွေးလေးမဲ့ မွှေးနေတဲ့ နံပြားကို ပဲပြုတ်ဆီဆမ်းလေးနဲ့စားရတာ အင်မတန်မှ အရသာရှိပါတယ်။ coffee (သို့ မဟုတ်)ရေနွေးကြမ်း နဲ့ အရမ်းလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်မရဲ့ one of the favourite dessert food ဖြစ်ပါတယ်။း)
နောက်ထပ် coffee (သို့ မဟုတ်)ရေနွေးကြမ်း နဲ့ အရမ်းလိုက်တဲ့ အစားအစာကိုတော့ ပဲပလာတာ၊ ဒါမှမဟုတ် အီကြာကွေးကိုစားပေါ့ ။
မုန့် ဟင်းခါးလည်းမစားချင်ဘူး၊ ဂျုံနဲ့ လုပ်ထားတဲ့ အစားအစာတွေလည်း စားရတာရိုးနေပြီဆိုရင် မန္တလေးစာ နန်းကြီးသုပ်စားနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်မကတော့ နန်းကြီးသုပ်ဆိုရင် မန္တလေးstyle ပဲမှုန့် များများနဲ့စိမ့်စိမ့်လေးမှ ကြိုက်ပါတယ်။ ရန်ကုန် style ချဉ်ငံစပ်ကို သိပ်မကြိုက်ပါဘူး။
ကောက်ညှင်းနဲ့ လုပ်ထားတဲ့ အစားအစာတွေကို စားချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဆီထမင်းကို ငါးခြောက်ဖုတ်နဲ့ တွဲပြီး သုံးဆောင်နိုင်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ်ရင် ကောက်ညှင်းပေါင်း ပူပူလေးကို စားပေါ့။ ကောက်ညှင်းနဲ့ လုပ်ထားတဲ့ အစားအစာတွေဟာ များသောအားဖြင့် အစာမကြေတတ်ပါဘူး။ ကောက်ညှင်းစာကြိုက်တဲ့သူတွေ အစာကြေဆေးလေးတော့ ဆောင်ထားကြဦးနော်။
နံနက်ခင်းမှာ စားသုံးနိုင်တဲ့ တခြား မြန်မာ့ရိုးရာစားစရာတွေကတော့ အကြော်စုံ၊ ဆနွင်းမကင်း၊ သာကူပေါင်း၊ မုန့် စိမ်းပါင်း၊ မုန့် လင်မယားတို့ ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
တရားစခန်းမှာတုန်းကတော့ ဗိုက်ပြည့်တဲ့ နံနက်စာတွေကျွေးပြီးရင် ကျောက်ကျောလိ်ုဟာမျိုး ထပ်ကျွေးပါတယ်။ အုန်းနို့ နဲ့ ထိုးထားတဲ့ ကျောက်ကျောအမာ၊ အုန်းစိမ်းနဲ့ ထိုးထားတဲ့ ကျောက်ကျောအပျော့၊ ဖျော်ရည်နဲ့ ရောထိုးထားတဲ့ကျောက်ကျော စသည်ဖြင့်ပေါ့......
ကဲ....နံနက်ခင်းစာ တော်တော်များများကိုတော့ ပြောပြပြီးပြီနော်။ စားချင်ရင်လည်း monitor ကနေ ယူစားကြပေါ့။ ;) ရေးရင်းရေးရင်းနဲ့လက်လည်းညောင်းလာပြီ....ဗိုက်လည်းဆာလာပြီ။ lunch သွားစားလိုက်ဦးမယ်။ see u all :D
Images Source; Forward Email To Continue Reading
Posted by witch83 at 3:19 PM No comments:
ဆရာ - မောင်ပု၊ ရေ ရဲ. ဓါတုဗေဒ ဖော်မြူလာ ကိုပြောစမ်း။
မောင်ပု - H I J K L M N O
ဆရာ - ဘာတွေ လာပြောနေတာလဲ။
မောင်ပု - ဆရာပဲ မနေ.က သင်တယ်လေ. H to O ဆို။
အဖေက ကျွန်တော့်ကို နိုက်ကလပ်တွေ မသွားဖို့၊ မလုံတလုံ ၀တ်ထားတဲ့ဖက်ရှင်ရှိုးတွေ သွားမကြည့်ဖို့ အမြဲပြောတယ်။ အဖေ့စကားနားမထောင်ဘဲအဲဒီလို နေရာမျိုးတွေ သွားရင် မမြင်သင့်တာတွေ မြင်တတ်တယ်လို့ အဖေက ပြောပါတယ်။ အဖေက မသွားနဲ့ ပြောမှ တခါမှ မရောက်ဖူးတဲ့ကျွန်တော်သွားချင်လာမိတယ်။ တရက်မှာ အဖေမသိအောင် တိတ်တိတ်လေး လက်မှတ်ဝယ်ပြီး ကျွန်တော်သွားခဲ့တယ်။ ၀င်ဝင်ချင်းပဲ မမြင်သင့်တာကို ကျွန်တော်မြင်သွားတယ်။ ဘာမြင်ခဲ့လဲ သိလား...ကျွန်တော့် "အဖေ" ကိုလေ....
Sardar Jee's Jokes
WHILE IN A DRUG STORE (Mr Bean's Jokes)
AT ATM MACHINE (Mr Bean's Jokes)
Marriage (Mr Bean's Jokes)
Mr. Bean: 16Friend: Why?
အာဒမ်က ဘုရားသခင်ကို မေးဧ။်
"ဘာကြောင့်များ ဧဝကို သိပ်လှအောင် ဖန်တီးခဲ့ရတာလဲ ဘုရား"
"ဘာကြောင့်များ ဧဝကို သိပ်ချိုသာအောင် လုပ်ပေးခဲ့ရတာလဲ ဘုရား"
"ဒါမှ မင်း, သူ့ ကိုချစ်မိမှာပေါ့"
ဤအချက်ကို အာဒံသည် ခဏမျှစဉ်းစားလိုက်သည်။
"ဒါဖြင့် ဘာလို့ဧဝကို သိပ်တုံး သိပ်အအောင် ဖန်တီးခဲ့ရတာလဲ ဘုရား"
ထိုအခါ ဘုရားသခင်က "ဒါမှ သူ မင်းကိုချစ်မိမှာပေါ့" ဟုပြန်ဖြေလေသတည်း ။ ။
( တုံးလို့ ကြိုက်ကိုတော့ someone special ကိုရည်ရွယ်ပြီး တင်ထားတာပါ.....ကာယကံရှင်ဖတ်မိရင် စိတ်မဆိုးစေလိုပါ။ :D )
Posted by witch83 at 4:02 PM No comments:
စိုးစန္ဒာထွန်း မောင့်အချစ်မြားစူး ရူးရပြီပေါ့လေ....
Lဆိုင်းဇီ လာချင်ရင် အနီးလေး....ကြိုမယ်ရှင့်.....
နန်းစုရတီစိုး ကျမနောက်ကို မလိုက်ခဲ့ပါနဲ့ မေမေဆူလိမ့်မယ်.....
အငဲ ဟောင်းသွားပြီလား ....ဟောင်းသွားပြီလား.....
စိုးစန္ဒာထွန်း မနှောင်းသေးပါဘူး...မဟောင်းသေး ပါဘူး အချစ်ရေ.....
၀ိုင်ဝိုင်း တော်ပြီကွာ ဒီဖုန်းစုပ်ကြီးကို လွှင့်ပစ်လိုက်စမ်းပါ.....
ထွန်းအိနြာဗို ငါလေ မြင်နိုင်ရင် နင့်ကိုပြချင်တယ်......
တင့်တင့်ထွန်း နမ်းပါ နမ်းပါ နမ်းပါ.....
တင့်တင့်ထွန်း ကြိုက်တယ်....မင်းလုပ်သမျှ ကြိုက်တယ်.....
ထူးအိမ်သင် မေ့လိုက်တော့ အချစ်လေးရေ.......
ခင်ဖုန်း မင်းကြောင့် မင်းကြောင့် ပါနော်.......
စည်သူလွင် အချစ်ရေ ......ကိုယ့်ကြောင့်........
မေဆွိ ကိုကိုရေ ..ကွယ်ရာမှာ အခြေမများနဲ့နော်......ကိုကိုနော် နော် နော့်.....
သျှားအိဘိုဘိုဟန် အဖေအမေတွေက ပြောတာလား...အကိုမောင်တွေက ပြောတာလား.......
ပန်းအိဖြူ နေညိုချိန် တိမ်တောက်တဲ့ခါ ရွာလမ်းနဘေးမှာ....စာဥတို့ သူငယ်ချင်းမတွေ ရေခပ်ဆင်းလို့လာ......
စိုင်းစိုင်း ရေအိုးလေးလှုပ်ပါဟေ့ ...အိုးလေး လှုပ်ပါဟေ့....
တွံတေးသိန်းတန် မိန်းမတွေ မာယာလောက်တော့ ပျင်းသေးတယ် ပျင်းသေးတယ်.....
I hope that you all will love it. I got this fromaforward mail. To Continue Reading
Posted by witch83 at 12:18 PM 1 comment:
ဒီတစ်ခါတော့ ဆေးဘက်ဝင်မှိုများအကြောင်းကို ရေးချင်ပါတယ်။
ဆေးဘက်ဝင်မှိုများတွင် အန်တီအောက်စီဒန့် ဓါတ်၊ အာဟာရဓါတ်နှင့် သက်စောင့်သြဇာဗီတာမင်ဓါတ်များ ကြွယ်ဝစွာပါဝင်ပြီး နေ့စဉ်မှိုစားသုံးခြင်းဖြင့် ရင်သားကင်ဆာ ဖြစ်စေနိုင်သည့် အဖုအကြိတ်များ ထွက်လာနိုင်ခြေကို လျှော့ချပေးနိုင်ကြောင်း သုတေသန လေ့လာမှုစစ်တမ်းများအရ သိရသည်။ ၄င်းအကျိုးအာနိသင်များသည် လတ်ဆတ်သောမှိုများ တွင် ပိုမိုပါဝင်ကြောင်း သုတေသီများက ပြောကြားခဲ့ကြသည်။ မှိုအခြောက်များတွင် ရင်သားကင်ဆာ ကာကွယ်နိုင်မှုစွမ်းရည် အနည်းငယ်ကျဆင်းနေတတ်ပြီး ရင်သားကင်ဆာ ခြိမ်းခြောက်မှုကို (၅၀)ရာခိုင်နှုန်းမျှသာ ဟန့်တားနိုင်ချိန်တွင် လတ်ဆတ်သောမှိုများက (၆၄)ရာခိုင်နှုန်းထိ တားဆီးနိုင်ကြောင်း တရုတ်သုတေသန ပညာရှင်များကတွေ့ရှိခဲ့သည်။
ထိုရလဒ်ကို ဆက်လက်စီစစ်ပြီးနောက် အချို့သော မှိုစားများသည့် အမျိုးသမီးများတွင် ရင်သားကင်ဆာ ဟန့်တားနိုင်ခြေသည် (၉၀)ရာခိုင်နှုန်းထိ ထိုးတက်သွားကြောင်း ဆရာဝန်များက ပြောကြားခဲ့ကြသည်။ ဓာတ်ခွဲခန်း စမ်းသပ်ချက်များအရ မှိုအတွင်းရှိ ဓာတ်ပစ္စည်းများသည် ကင်ဆာဖြစ်စေသည့် အကြိတ်များကို ဖျက်ဆီးတတ်သည့် ဂုဏ်သတ္တိ အထင်အရှားရှိနေပြီး လူ၏ကိုယ်ခံစွမ်းအား စနစ်တစ်ခုလုံးကို လှုံ့ဆော်ပေးကြောင်း သိရှိလာရသည်။ Tennessee University ရှိ အစားအသောက်ဆိုင်ရာ သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာ ဌာနမှ ဒေါက်တာLana Zivanovic က မှိုတွေမှာ beta-glucan compound ဓါတ် အများအပြား ပါဝင်ပြီး အဲဒီဓါတ်က လူ့ ကိုယ်ခံအားစနစ်ကို နိုးကြားစေပြီး ဝင်လာတဲ့ရောဂါအမျိုးမျိုးကို ကာကွယတိုက်ဖျက်ပေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ အခြားအထောက်အထားများအရလည်း မှိုဟာ ရင်သားကင်ဆာ တိုက်ဖျက်မှု ဆေးဝါးများနှင့် အာနိသင်အတူတူရှိပြီး ကင်ဆာဖြစ်စေနိုင်သည့် Oestrogen ဟိုမုန်းများ ထွက်လာခြင်းကို ပိတ်ပင်ပေးကြောင်းလည်း သိရှိရပါသည်။
ကယ်လီဖိုးနီးယားမှ ပညာရှင်များသည် ပြီးခဲ့သောလအတွင်းက တစ်နေ့မှိုနှစ်ကြိမ်စားပါက တစ်လအတွင်း ကင်ဆာတားဆီးနိုင်မှု သဘာဝစွမ်းရည် သိသိသာသာ တိုးမြင့်လာကြောင်း ထောက်ခံထားကြသည်။ ဩစတြေးလျနိုင်ငံရှိ အနောက်ဩစတြေးလျ တက္ကသိုလ်က စမ်းသပ်တွေ့ရှိမှုအရ ဗြိတိန်တွင် နှစ်စဉ်အမျိုးသမီး (၄၀၀၀၀)မျှ ရင်သားကင်ဆာ ဖြစ်ပွားချိန်တွင် တရုတ်နှင့် အရှေ့ဖျားဒေသနိုင်ငံများမှ ရင်သားကင်ဆာဖြစ်ပွားသူ အမျိုးသမီးဦးရေ ကျဆင်းလာမှုကြား အဓိကကွာခြားမှုမှာ မှိုစားသည့် အလေ့အထပင်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် မှိုများများစားသည့် အမျိုးသမီးများတွင် ကင်ဆာကြိတ်မဖြစ်နိုင်ဟုပင် သတ်မှတ်နိုင်ကြောင်း သုတေသီများကဆိုသည်။ ဆေးပညာဆိုင်ရာ သုတေသန စာတမ်းတစ်ခုကလည်း မှိုပမာဏများပြားစွာ စားသုံးလေလေ၊ ကင်ဆာဖြစ်ပြီးနှင့် မဖြစ်ခင် အခြေအနေနှစ်ခုလုံးအတွက် အကျိုးရှိလေလေဟု ဖော်ပြထားကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ဆေးဘက်ဝင်မှိုအမျိုးမျိုးရှိရာ၌ လူသိများသောမှို(၃)မျိုးမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
(၁) Mitake mushrooms
အစာအိမ်နှင့် အူလမ်းကြောင်းအတွက် အကျိုးရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။ သွေးချို၊ ဆီးချိုသမားတွေအတွက်လည်း သင့်တော်ပါတယ်။ မှိုတွေထဲမှာ ကင်ဆာရောဂါကို အထိရောက်ဆုံး ကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။
(၂) Sitake mushrooms
ရှိတာကဲမှိုတွေကတော့ အာဟာရဓာတ်တွေ ဖြည့်ပေးပြီး အသည်းရောဂါတွေအတွက် ကောင်းတယ်လို့သိရပါတယ်။ AIDS ဝေဒနာသည်တွေ စားသုံးသင့်တယ်လို့ကျန်းမာရေးပညာရှင်တွေက ဆိုပါတယ်။
(၃) Reishi mushrooms
Reishiမှိုတွေကတော့ အသက်ရှုလမ်းကြောင်း systemကို အထောက်အကူပြုပြီး ပန်းနာရောဂါသည်တွေအတွက် အထူးသင့်တော်ပါတယ်။
When I read planet news, I read about mushrooms and I got interested. So, I search for other extra data and write this post. I hope that this post will be useful.
Posted by witch83 at 2:54 PM No comments:
Labels: Health, ရေးမိသမျှ
Posted by witch83 at 12:16 PM No comments:
" ရီသောသူသည် အသက်ရှည်၏ "
တစ်ခါက လူသားစားတဲ့တောကလူရိုင်းသားအဖဟာ အိမ်မှာချက်ဖို့အသားမရှိတော့တာနဲ့မြို့အစွန်နားအထိ တက်လာကြတယ်။ တွေ့တဲ့သူကိုဖမ်းခေါ်လာပြီးချက်စားဖို့ပေါ့။ ဒီလိုနဲ့လူအရိပ်အခြေစောင့်နေတုန်း သူတို့နားကိုမိန်းမပိန်ပိန်တစ်ယောက်ဖြတ်လာတယ်။သားကမေးတယ် " အဖေ၊ အဲဒီမိန်းမကို ချက်စားရအောင် ဖမ်းသွား မလား.." ဆိုတော့
အဖေက " နေဦး ဒီမိန်းမက ပိန်လွန်းတယ်။ အရိုးကြီးပဲ။ စားလို့မကောင်းဘူး။ "
သားကမေးတယ် " အဖေ၊ ဒီတစ်ယောက်က ၀၀တုတ်တုတ်ကြီး စားလို့ကောင်းမယ်။
အဖေကလည်း " ဒီတစ်ယောက်က ၀လွန်းတယ်။
သားကလည်း " အဖေ ဒီတစ်ယောက်ဆိုအနေတော်ပဲ။ ပိန်လည်းမပိန်၊ ၀လည်းမ၀ဘူး။ ဖမ်းသွားရအောင်..." လို့မေးတော့
အဖေပြန်ပြောလိုက်ပုံက " ဟုတ်တယ်၊ ဒီတစ်ယောက်ကအတော်ပဲ။ ဖမ်းသွားရအောင်။ အိမ်ရောက်ရင်မင်းအမေကို ချက်စားကြတာပေါ့သားရယ် …" ဟူသတည်း။ To Continue Reading
Posted by witch83 at 12:47 PM2comments:
ကျွန်မကြိုက်တဲ့ Quotes တစ်ချို့ (၁)ဆိုပြီး ရေးထားတာပါ။ နောက်မှ ရေးထားတဲ့ ပို့(စ်)အားလုံး sync ဖြစ်အောင် မှတ်သားမိတဲ့ Quotes တစ်ချို့ (၁)ဆိုပြီး ပြောင်းလိုက်တာပါ။ (၁) ပျော်ရွှင်မှု တံခါးပေါက်တစ်ပေါက် ပိတ်သွားတဲ့အချိန်မှာပဲ နောက်တံခါး တစ်ပေါက် ပွင့်လာတယ်။ ဒါပေမဲ့ အချိန် တော်တော်များများမှာ ပိတ်သွားတဲ တံခါးကို ငေးမှိုင်ထိုင်တွေး နေတာန့ဲပဲ ကျွန်မတို့ အတွက် ပွင့်လာတဲ့ နောက်တံခါးကို သတိမမူမိနိုင်တော့ဘူး။
(၂) ကျွန်မတို့ ဟာ မဆုံးရှုံးရမချင်း ဘာတွေပိုင်ဆိုင်ထားသလဲဆိုတာ သတိမထားမိကြဘူး။ အဲဒီအတိုင်းပဲ။ ကျွန်မတို့ ဆီ ပစ္စည်းတစ်ချို့ ရောက်လာတဲ့ အချိန်ကြမှ အရင်က ဒါတွေ ဘ၀မှာ လစ်ဟာနေခဲ့ပါလားဆိုတာ သိလာရတတ်ပါတယ်။
(၃) သင့်ကိုမွေးဖွားလာတုန်းက သင်ဟာ ငိုနေခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သင့်ဘေးပတ်လည်က လူတွေ အားလုံး ပြုံးနေခဲ့ကြပါတယ်။ သင် သေသွားပြီ ဆိုရင်တော့ ဒီလိုဖြစ်အောင် အခုကတည်းက နေနိုင်အောင် ကြိုးစားပါ။ သေခါနီးအချိန်မှာ သင်ပတ်လည်က လူတွေ အားလုံး ငိုနေကြပေမဲ့ သင်ဟာ ပြုံးနေနိုင်သူပေါ့။
(၄) ဘဝမှာ ဝေဝေဝါးဝါးနဲ့ ဝေးသွားတဲ့ကိစ္စတွေကလည်း အများကြီးပါ....
ကိုညီလင်းဆက်ရဲ့ "တိုတိုလေးနဲ့ တိုးတိုးလေး" ကဗျာမှ
(၅) အချစ်စစ်ဆိုတာ ချစ်နိုင်တဲ့အချိန်၊ ချစ်ခွင့်ရတဲ့အချိန်မှာ တန်ဖိုးထား ချစ်နေဖို့နဲ့ လက်လွတ်သင့်တဲ့ အချိန် ကြုံလာရင် လက်လွတ်တတ်ဖို့ပါပဲ။ တစ်ခုကို လက်လွတ်တတ်မှ ကျန်အရာအားလုံးကို ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိမယ်။ လှည့်စားတတ်တဲ့ ကံကြမ္မာစက်ကွင်းထဲကနေ ကျွန်မတို့ လွတ်မြောက်ပါစေ....
မနိုင်းနိုင်းစနေရဲ့ “ခင်ပွန်းရဲ့ချစ်သူ” ဝထ္တုကောက်နုတ်ချက်မှ
(၆) Our greatest glories in lives are not in the times we fail, but in the times we try again.
Posted by witch83 at 1:39 PM No comments:
Labels: Share, စိတ်အာဟာရ, ရေးမိသမျှ